ကျော်ဇင်: ပန်း ၁၀ မျိုး
ပန်း ၁၀ မျိုး
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံတိုင်းတွင် မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များရှိကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်လည်း ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များရှိပါသည်။ ထိုများထဲမှ ရိုးရာ ပန်း၁၀ မျိုးသည် မြန်မာ့သမိုင်း တလျှောက် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ပန်း၁၀ မျိုးကို " ဘုရားမတင် နတ်မ၀င် လူတွင်ပန်း (၁၀) မျိုး " လင်္ကာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုပန်း ၁၀ မျိုးမှာ
-(၁) ပန်းထိမ် (Gold, Silver Smith)အဖိုးတန်သော ရွှေ၊ ငွေနှင့် သတ္တုစသည်တို့ဖြင့် လူတို့၏ လက်ဝတ်ရတနာ၊ အသုံးအဆောင် အမျိုးမျိုးတို့ကို သီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျောက်မျက်မျိုးစုံ တို့ဖြင့် တွဲဖက်၍ ပြုလုပ်သော ပညာဖြစ်သည်။
(၂) ပန်းပဲ (Black Smith)
သံ၊ သတ္တုတို့ကိုမီးအပူရှိန်ဖြင့် ပျော့ပျောင်းစေကာ လိုရာပုံရရန် ပုံသွင်းထုရိုက်ရသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ့သမိုင်းတလျှောက်တွင် ပန်းပဲလုပ်ငန်းသည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ မြန်မာဘုရင်များ၊ စစ်သူကြီးများ၊ စစ်သားများ ကိုင်ဆောင်ရန် ဓါး၊ လှံ၊ လက်နက်များ ထုတ်ပေးခဲ့ရသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
(၃) ပန်းချီ (Painting)
လူတို့၏ ခံစားချက်ကို နှုတ်၊ စကားလုံး၊ စာတို့ဖြင့် သရုပ်ဖော်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ စုတ်တံဖြင့် ခြယ်မှုန်းဖေါ်ပြသော အနုပညာဖြစ်သည်။ ပန်းချီပညာသည် ရှေးကျောက်ခေတ်အခါကပင်ရှိခဲ့သော ပညာရပ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အရာဝတ္ထုများပေါ်တွင်တွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်။
- ဘုရား၊ဂူ နံရံပန်ချီ
- သွတ်ပြားပေါ်တွင်ရေးသော နိပါတ်တော်ပန်းချီ များကို တွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်။
ဂူ၊ ဘုရားများ အ၀င်ပေါက်အပေါ်ရှိ မုခ်တကဲတွင် အင်္ဂတေပညာဖြင့် ပန်းခတ်၊ ပန်းလက် ရုပ်ကြွ၊ ရုပ်လုံးအမျိုးမျိုးသော ပုံသဏ္ဍန် သက်ရှိသက်မဲ့ အရုပ်များ ပြုလုပ်ပူဇော်ထားခြင်း ကို ပန်းတော့ပညာ ဟုခေါ်သည်။ ဗိဿနိုး၊ သရေခေတ္တရာခေတ်ကပင် ပန်းတော့လက်ရာ ပညာများကို တွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်။(၅)ပန်းရန် (Masonry)ပျူခေတ်မတိုင်မီကပင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ပညာရပ်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦးများ ဆောက်ရာတွင် အခြေခံဖြစ်သော အုတ်များကို အင်္ဂတေဖြင့် တွဲကပ်စေသော ပညာရပ်ဖြစ်သည်။ ပန်းရန်ပညာမရှိပါက အုတ်အဆောက်အဦးများ ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ ပုဂံဘုရားများကို လေ့လာခြင်းဖြင့် မြန်မာတို့၏ ပန်းရန်ပညာကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
(၆)ပန်းတမော့ (Stone Curving)
ကျောက်များ၊ သဲကျောက်များ၊ စကျင်ကျောက်များကို အရုပ်သဏ္ဍန်ပေါ်အောင် ထုလုပ်သည့် ပညာရပ်ဖြစ်သည်။ အေဒီ ၂ ရာစုလောက်မှစ၍ ယနေ့တိုင် ခေတ်အဆက်ဆက်မှ လက်ရာအမျိုးမျိုးကို လေ့လာတွေ့ နိုင်ပါသည်။ အထင်ရှားဆုံး ပန်းတမော့ လက်ရာမှာ မင်းတုန်းမင်းကြီးလက်ထက် ကုသိုလ်တော် ဘုရားမှ ပိဋကတ်တော်များကို နောင်လား နောင်သားများ လေ့လာနိုင်ရန် စကျင်ကျောက်ပြား ၇၂၉ ချပ်ပေါ်တွင် ပါဠိဘာသာဖြင့် ထွင်းထု အက္ခရာ တင်ထားခဲ့သည်။ ပုံသည် ကုသိုလ်တော်ဘုရားဝင်းအတွင်းရှိ ပိဋကတ်တော်များထားရာ ပိဋကတ်တိုက်ပုံ ဖြစ်သည်။
(၇)ပန်းပွတ် (Wood Turner)ယွန်းသစ်သားဖြင့် အသုံးအဆောင်များ၊ အလှအပများကို ပြုလုပ်သည့် ပညာဖြစ်သည်။ ပန်းပွတ်ပညာကို ကလပ်အမျိုးမျိုး၊ လက်ဖက်အစ်၊ ဆွမ်းအုပ်၊ နွားလှည်းဘီးများမှ သစ်သားပွတ်လုံးများ၊ ထီးဖြူ၊ ရွှေထီး လက်ရိုးလက်ကိုင်များတွင် တွေ့ ရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ပန်းပု ပညာဖြင့် ရုပ်လုံးဖော်ထားသော အကြမ်းထည်များကို ချောမွေ့ တောက်ပြောင်စေရန် ပန်းပွတ်ပညာဖြင့် ပြုလုပ်ရသည်။
(၈)ပန်းပု (Wood Curving)
သစ်သား၊ ဆင်စွယ်၊ မြေစေး၊ ပလာစတာတို့ဖြင့် ရုပ်လုံးရုပ်ကြွများ ပြုလုပ်ထွင်းထုသော ပညာရပ်ဖြစ်သည်။ ပန်းပုပညာဖြင့် ထုလုပ်ထားသော ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွများကို မြန်မာနိုင်ငံ တွင် နေရာဒေသအနှံ၌ တွေ့ မြင်နိုင်သည်။ ပန်းပုပညာသည် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် အထွန်းကားဆုံးဖြစ်သည်။
(၉)ပန်းတဉ်း (Brass Smith)
ကြေးသတ္တုကို လိုရာပုံလောင်းကာ ပြုလုပ်သော အတတ်ပညာဖြစ်သည်။ ပျူခေတ် အခါကပင် ရှိခဲ့သောပညာရပ်ဖြစ်သည်။ ပြည်မြို့  ခင်ဘကုန်းမှ တူးဖော်ရရှိသော တူရိယာအနုပညာရှင် ကြေးရုပ်ကလေး ၅ ရုပ်သည် ပျူခေတ် လက်ရာဖြစ်သည်။ ယခုအခါ မြန်မာပြည် တန်ခိုးကြီးဘုရား များတွင် ပန်းတဉ်းပညာရပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ပူဇော်ထားသော ဘုရားရုပ်ပွားတော်များ ကိုဖူးတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ပန်းတဉ်းပညာရပ်ဖြင့် ဘုရားဆွမ်းတော်တင် အသုံးအဆောင် များ၊ ကြေးခေါင်းလောင်းများ၊ ကြေးစည်များ၊ ပန်းအိုးများ၊ သောက်တော်ရေခွက်များ၊ ကြေးမီပူများကိုလည်း တွေ့  ရှိနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပန်းတဉ်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထား သော မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီး၏ လက်ရာသည် ကမ္ဘာတွင်ကျော်ကြားသည်။
(၁၀)ပန်းယွန်း (Lacquerware)၀ါးဖြင့် လူအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများပြုလုပ်သည် အတတ်ပညာဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ နေရာဒေသ အတော်များများတွင် ယွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများကို တွေနိုင်သည်။ နှီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများထဲတွင် ဗုဒ္ဒရုပ်ပွားတော်များ လည်းပါရှိခဲ့သည်။ ရှမ်း ပြည်နယ် ၊ ကလောမြို့ တွင် အပူဇော် ခံထားသော နှီးဘုရားသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျော်ကြားသည်။
မြန်မာတို့၏ ပန်း ၁၀ မျိုး အနုပညာလက်ရာများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ကမ္ဘာထိ အောင် ကျော်ကြားသည်။ ထို ပန်း ၁၀ မျိုးကို " ပဲ၊ ထိမ်၊ တဉ်း၊ တော့၊ မော့၊ ရန်၊ ပု၊ ပွတ်၊ ချီ၊ ယွန်း " ဟု အကျဉ်းချုပ် လင်္ကာဖြင့် မှတ်သားခဲ့ကြသည်။
Posted by kyaw zin at 5:25 AM
Labels: myanmar poem
Anonymous September 14, 2012 at 5:33 AM
အခုလို ဆိုတော့ တမျက်နှာထဲမှာ သတင်းများများကို တွေ့ရတာပေါ့
mg win June 2, 2013 at 7:53 PM
RFA (Burmese) အာအက်ဖ်အေ (မြန်မာပိုင်း)
I am kaung shin min. I am from mawlamyine.
I was born in Thai and Myanmar border.